ZVOKUTENGESWA Vagadziri uye vanotengesa - China ZVOKWEDZERA ZVINOKOSHA Factory
Dzese mhando dzeBonovo migomo inowanikwa.
Bonovo chengetedza yakazara yakazara mabhagidhi uye zvakabatanidzwa ne "S" mhando mabhureki aripo mune izvozvi.
BONOVO inopa yakakwana bhakiti mutsetse wevekuchera. Iyi tambo yepini-on uye Hinges yeCW Coupler mabhaketi anoratidzira akavandudzwa magadzirirwo kutora zvakazara mukana weakawedzera muchina simba.
Bonovo Mechanical Kurumidza Coupler yakagadzirirwa kushandiswa neOEM yakagadziriswa migomo uye zvakabatanidzwa. Bonovo Mechanical Inokurumidza Coupler inopa yakapusa uye inokurumidza nzira yekushandura yekuchera mabhaketi uye zvakabatanidzwa.Inogadziriswa pini nzvimbo yepini yepakati dhizaini inobvumira imwechete imwechete coupler kuti ikwane michina yakawanda yakasiyana mukirasi imwechete ye tonnage.
Maumbirwo eBonovo Bhokisi Rinotyora nderekuti goko rinovhara muviri wesando, uye goko rakagadzirwa nezvinhu zvekunyorovesa, izvo zvinogadzira bhavhu pakati pomuviri wesando nehombodo uye zvakare zvinoderedza kuzungunuka kweanotakura. Izvo zvakanakira iyo Bonovo Bhokisi Rinotyora nderekuti rinogona kupa chengetedzo iri nani kumutumbi wesando, ruzha rwakaderera, kudzikamisa kuzungunuka kweanotakura, uye zvakare kugadzirisa dambudziko reakasununguka goko. Izvi zvakare ndizvo zvakakurisa uye kusimudzira maitiro emusika wepasi rose.